Statement by Ambassador Kyaw Moe Tun, Permanent Representative of the Republic of the Union of Myanmar to the United Nations during the Debate on “Interaction between the United Nations, National Parliaments and the Inter-Parliamentary Union” at the UN General Assembly, held on 21 June 2022
နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်း၊ ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်များနှင့် နိုင်ငံတကာပါလီမန်များအဖွဲ့အနေဖြင့် မြန်မာပြည်သူများကို ကိုယ်စားပြုရပ်တည်လျက်ရှိသည့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြု ကော်မတီနှင့် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတို့နှင့် ဆက်လက်ထိတွေ့ဆက်ဆံ၍ မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဒီမိုကရေစီနှင့် တရားမျှတမှုရှိရေးအတွက် ကြိုးပမ်းရာ၌ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြှင့်တင်ရန် ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်းမှ အလေးထား တိုက်တွန်းတောင်းဆိုခဲ့
(၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၁ ရက်နေ့၊ နယူးယောက်မြို့)
၁။ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၁ ရက်နေ့တွင် ကုလသမဂ္ဂ၊ အထွေထွေညီလာခံ၌ ကုလသမဂ္ဂ၊ အမျိုးသား လွှတ်တော်များနှင့် နိုင်ငံတကာပါလီမန်များအဖွဲ့ (Inter-Parliamentary Union - IPU) အကြား အပြန်အလှန် အထောက်အကူပြုခြင်းဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲကို ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲ၌ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်းမှ မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ရာ၊ အောက်ပါ အဓိကအချက်များ ပါဝင်ပါသည် -
(က) လွှတ်တော်သည် ဒီမိုကရေစီ၏ အုတ်မြစ်ဖြစ်သည်နှင့်အညီ IPU မှတစ်ဆင့် ကုလသမဂ္ဂနှင့် နိုင်ငံအသီးသီး၏ အမျိုးသားလွှတ်တော်အသီးသီးအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရေး၏ အရေးပါမှုကို ယနေ့ဆွေးနွေးပွဲက ဖော်ပြနေကြောင်း၊ ပြည်သူတစ်ရပ်လုံး၏ အသံကို လွှတ်တော်များက ကိုယ်စားပြု၍ လွှတ်တော်များ၏ သုံးသပ်ချက်နှင့် ပါဝင်မှုသည် ကုလသမဂ္ဂ၏ အဓိကလုပ်ငန်းများအတွက် အရေးကြီးသည့်အပြင် နိုင်ငံအလိုက် ၂၀၃၀ အစီအစဉ် အကောင်အထည်ဖော်ရာ၌ အဓိကပါဝင်သည့် မိတ်ဖက်များဖြစ်ကြောင်း၊
(ခ) ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါသည် လက်ရှိရင်ဆိုင်နေကြရသည့် လူမှု-စီးပွားရေး အကျိုးဆက်များအပေါ် တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုများအပေါ် စိန်ခေါ်မှုများ ပိုမိုဖြစ်စေကြောင်း၊ စိန်ခေါ်မှုများကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရာတွင် လွှတ်တော်အသီးသီးသည် အရေးကြီးသည့် အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်လျက်ရှိပြီး၊ ကပ်ရောဂါလွန်ကာလ၌ စိန်ခေါ်မှုများဖြေရှင်းမှုနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကို နိုင်ငံအဆင့် အကောင်အထည်ဖော်မှုတွင် ခိုင်လုံသည့်ရလဒ်ရရှိရေးအတွက် ကုလသမဂ္ဂ၊ IPU နှင့် လွှတ်တော်အသီးသီးအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် မှုကို မြှင့်တင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း၊
(ဂ) မြန်မာပြည်သူများသည် လွတ်လပ်၍ မျှတသော ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲများ၌ လွတ်လပ်မျှတစွာ ဒီမိုကရေစီစနစ်ဖြင့် ၎င်းတို့၏ အသံကို ကိုယ်စားပြုရန် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကို ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ သို့ရာတွင် စစ်တပ်သည် “မဲစာရင်းမသမာမှု” ဟူသော မူမမှန်သည့် အကြောင်းပြချက်ဖြင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့က တရားမဝင်အာဏာသိမ်းခဲ့ကြောင်း၊ စစ်တပ်သည် ၎င်းကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲခဲ့သည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပေဒကို ချိုးဖောက်၍ ပြည်သူများ၏ ဒီမိုကရေစီဆန္ဒကို ဗြောင်ကျကျ လျစ်လျူရှုခဲ့ခြင်းဖြစ်ရာ၊ ယင်းလုပ်ရပ်သည် ကြီးမားသည့် နိုင်ငံတော် သစ္စာဖောက်မှုဖြစ်ကြောင်း၊
(ဃ) မြန်မာပြည်သူများက နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကို ထောက်ခံမဲပေးရာ၌ နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုအပေါ် ထောက်ခံမှုကို ပြသ ရုံသာမက ဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်မှုစနစ်အပေါ် ပြည်သူများ၏ ယုံကြည်အားကိုးမှုကို ပြသခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်သူ့ဆန္ဒကို လျစ်လျူရှု၊ ပစ်ပယ်ခွင့်မပြုနိုင်ကြောင်း၊ မျက်မှောက်ခေတ်၌ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကို လက်မခံကြောင်းနှင့် အာဏာသိမ်းမှုမဖြစ်မနေကျရှုံးရမည်ဟူသော ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ မှတ်ချက်ကို ပြန်လည်ပြောကြားလိုကြောင်း၊
(င) မြန်မာပြည်သူများ ရွေးချယ်ခဲ့သည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များသည် မြန်မာပြည်သူများကို ဆက်လက်ကိုယ်စားပြု၍​ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖော်ဆောင်ရေးတွင် ပါဝင်သင့်ပါဝင်ထိုက်သူအားလုံးနှင့် အတူ လက်တွဲဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်ကို အလေးထားဖော်ပြလိုကြောင်း၊ တရားမဝင်အာဏာသိမ်းမှု နောက်ပိုင်း ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၅ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စားပြုကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး၊ ကော်မတီသည် နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံလျက်ရှိကြောင်း၊ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်၏ စတုတ္ထအကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးကို ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလက ကျင်းပခဲ့ပြီး၊ ရွေးကောက်ခံ လွှတ်တော်အမတ် (၃၀၀) နီးပါးသည် စစ်တပ်၏ အသက်အန္တရာယ်ခြိမ်းခြောက်မှုနှင့် ဖမ်းဆီးမှုများကြားမှ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း၊
(စ) စစ်တပ်သည် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အများစုကို တရားမဝင်ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်၍ အနည်းဆုံး လွှတ်တော်အမတ်တစ်ဦးသည် အသက်သေဆုံးသည်အထိ စစ်ဆေးမေးမြန်းခံခဲ့ရကြောင်း၊ ၎င်းတို့၏ နေအိမ်နှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို တရားမဝင်သိမ်းယူခဲ့ကြောင်း၊ သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်နှင့် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲများ၌ ဒုတိယအကြိမ်သက်တမ်းအတွက် ရွေးချယ် ခြင်းခံခဲ့ရပြီး၊ ၎င်းတို့ကို စစ်တပ်မှ ဓားစာခံထိန်းသိမ်းထားကြောင်း၊
(ဆ) မြန်မာနိုင်ငံ၏ အဖြစ်အပျက်သည် စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သည့် လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ကပ်ဘေးဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၌ ​ကုလသမဂ္ဂသည် ထိတွေ့ဆောင်ရွက်လျက် ရှိရာ၊ ကုလသမဂ္ဂပဋိညာဉ်စာတမ်းတွင် “ကုလသမဂ္ဂ၏ ပြည်သူများ” ဆိုသည့် စာသားဖြင့် စတင်သည့် အလျှောက် ကမ္ဘာပြည်သူများကို သက်သေပြုသည့် ကုလသမဂ္ဂအနေဖြင့် ကျယ်လောင်ပြတ်သားသည့် မြန်မာပြည်သူများ၏ အသံကို နားထောင်စေလိုကြောင်း၊ စစ်တပ်အုပ်ချုပ်မှုကို အလိုမရှိမှု၊ ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စု တည်ထောင်လိုမှုတို့သည် မြန်မာပြည်သူများ၏ အသံဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်ထောင်စု ကိုယ်စားပြု လွှတ်တော်ကော်မတီနှင့် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတို့သည် ပြည်သူအား ကိုယ်စားပြု ရပ်တည်သည်ကို ပြည်သူများက ကြိုဆိုလက်ခံထားကြောင်း၊
(ဇ) ထို့ကြောင့် နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်း၊ ကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်များနှင့် IPU အနေဖြင့် မြန်မာပြည်သူများကို ကိုယ်စားပြုရပ်တည်လျက်ရှိသည့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စားပြုကော်မတီနှင့် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတို့နှင့် ဆက်လက်ထိတွေ့ဆက်ဆံ၍ မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဒီမိုကရေစီနှင့် တရားမျှတမှုရှိရေးအတွက် ကြိုးပမ်းရာ၌ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြှင့်တင်ရန် တိုက်တွန်းလိုကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာအသိုက်အဝန်းနှင့် ကုလသမဂ္ဂ၏ မြန်မာပြည်သူများအပေါ် အားပေးထောက်ခံမှုသည် အရေးကြီးသည့် ယခုအချိန်အခါ၌​ မပျက်ကွက်သင့်ကြောင်း၊ ဤသို့ ဆက်လက်တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်သွားခြင်း ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် တရားမျှတမှုနှင့် ဒီမိုကရေစီပေါ်ထွန်းမှုရရှိမည်ဟု ခိုင်မာစွာ ယုံကြည်ပါကြောင်း။
၂။ အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်း ပြောကြားခဲ့သည့် မိန့်ခွန်းအပြည့်အစုံ (အင်္ဂလိပ်ဘာသာ) အား ပူးတွဲဖော်ပြအပ်ပါသည်။
၃။ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ကုလသမဂ္ဂ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်များနှင့် IPU အကြား ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်အဆိုမူကြမ်းတွင် ပူးတွဲအဆိုရှင်အဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ ယင်း ဆုံးဖြတ်ချက်အဆိုမူကြမ်းကို တူညီဆန္ဒဖြင့် အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။
၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၁ ရက်၊
during the Debate on “Interaction between the United Nations, National Parliaments and the Inter-Parliamentary Union” at the UN General Assembly
(New York, 21 June 2022)
First of all, I wish to thank the Secretary-General for his report on the interaction between the United Nations, national parliaments and the Inter-Parliamentary Union. Myanmar cosponsored the draft resolution A/76/L.63 and encourages the United Nations, IPU and national parliaments to fully implement it. In this regard, I thank Portugal for its leadership. I would like to commend the Secretary-General of IPU and his team for their hard work.
When the parliament isacornerstone of democracy, today interaction highlights the importance of further cooperation between the United Nations and national parliaments through the Inter-Parliamentary Union. National parliaments represent the voices of the people from the ground. Their perspectives and inputs are of great value to the formulation of major initiatives of the United Nations. Besides, parliaments continue to be essential partners in the implementation of the 2030 agenda at the national levels.
It is now clear that the COVID-19 pandemic has made the goal of timely achieving the sustainable development goals even more challenging. Meanwhile, we have seen the vital roles of national parliaments in responding to the socio-economic consequences of the pandemic including by enacting emergency and budgetary legislations. In the post-pandemic context, we need to strengthen engagement and interactions between the UN system, IPU and national parliaments to address the implementation of challenges and turn global agenda into concrete results on the ground at national levels.
In Myanmar, the people freely and democratically elected their representatives in the free and fair 2020 general elections to represent their voices in the national parliament Pyidaungsu Hluttaw. However, the military perpetrated an illegal coup on 1 February 2021 under the pretext of the so-called ‘voter lists fraud’ by blatantly disregarding the democratic will of the people as well as by violating the Constitution they themselves wrote. It is an act of high treason. Since then, the illegal military junta has been committing widespread and systematic atrocities against the people of Myanmar, amounting to the crimes against humanity. This is happening before our very eyes and the devastating illegal coup has shattered lives of whole populations of Myanmar in every aspect. I wish to reiterate the very fact that our people cast their votes in favour of the National League for Democracy led by State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi in the elections, demonstrating their support not just forapolitical party but also their trust and confidence inademocratic system of governance. We cannot allow disregarding or overlooking the will of the people. I wish to recall the words of the UN Secretary-General that the military coup is not acceptable in this modern world and the coup must fail.
Democratically elected members of parliament continue to represent the people’s will and have been working with all democratic stakeholders to put the country on the path toafederal democratic future. Right after the illegal coup, on5February 2021, the Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH) was formed with elected parliamentarians to perform duties that the people have entrusted according to the result of November 2020 general elections. The Committee has been actively engaging with the international community. The fourth Session of Pyidaungsu Hluttaw was held in April this year with the participation of nearly 300 elected members of parliament despite the continued physical threats, persecution and illegal arrests by the military.
Many of members of parliament remain in illegal detention by the military and at least one MP was interrogated to death in the custody. Their houses, assets and properties have been illegally confiscated. President U Win Myint and State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi, who were both elected forasecond term in 2020 elections, are now being held in hostage by the military.
What is going on in Myanmar right now is the humanitarian catastrophe compounded by the illegal military coup. Myanmar crisis is on the agenda of the different organs of the United Nations including this Assembly. The UN’s engagement in Myanmar is ongoing. The United Nations was founded in the name of the people of the world as the UN Charter clearly begins with “We the peoples of the United Nations”. Please listen to the voice of the people of Myanmar – their voices have been loud and clear. People don’t want military rule and the people want to buildafederal democratic union. People have accepted and welcomed CRPH and the National Unity Government of Myanmar to represent them and stand in for them. I wish to emphasize that the UN including their representatives and IPU need to continue to strengthen cooperation and engagement with the CRPH.
To end the violence and atrocities committed by the military and to restore democracy in Myanmar, the international community, especially the United Nations, must take decisive action. The supports of the international community and the United Nations for the people of Myanmar must not fail at this critical moment. I strongly believe that with the strengthened engagement and cooperation with CRPH and the NUG by the UN, IPU and national parliaments and their continued support towards our fight for democracy, justice and democracy will prevail in Myanmar.
Statement by Ambassador Kyaw Moe Tun at UN Security Council Open Debate (2 June 2022)